Kana iwe uri mudzidzi unogona kuve nemwedzi mitanhatu yemahara Apple Music | IPhone nhau
Imba nepahwindo ine kunyoreswa kweApple. Uye zvinoita sekunge iyo Cupertino kambani iri kuda kuwana iyo yakanyanya kuwanda nhamba yevashandisi mumasevhisi ayo chero, mune iyi kesi zvakare inopa vadzidzi vasina kunyoreswa kunoshanda muApple Music hafu yegore rebasa zvachose.
Zvekare Apple inokoka avo vane UNiDAYS account kune yekumhanyisa mimhanzi sevhisi kwemwedzi mitanhatu uye uku kusimudzira kwatoitwa nguva yadarika. Ehezve, kusimbisa vashandisi kunoita kunge ndicho chikuru chinangwa chekusimudzira uku nebasa remahara uye pakupedzisira vanhu vanogona kuzvijairira.
Izvozvi vashandisi vane account yemudzidzi, vadzidzisi nevamwe Iva nesaphulelo inoshanda paApple TV + uye Apple Music services, asi izvi zvinowedzerwa mukusimudzira kunoshanda. Kana iwe uchida kuimisa, isu tinongofanirwa kuzvizivisa pachedu pamberi paApril 30 wegore rino needu email email. Kana tangoisa data tinokwanisa kunakidzwa nemwedzi mitanhatu yeApple Music mahara.
Hapana mubvunzo kuti izvo zvakagadzirirwa kuwedzera huwandu hwakawanda hwevanyori kune sevhisi uye nekudaro rudzi urwu rwekusimudzira runoita iwe ugadzire yako yaunofarira mimhanzi runyorwa, gadzirisa iyo application kune yaunofarira uye pakupedzisira "gara" nayo kana kusimudzira kwapera . Ichokwadi ndechekuti yakawanda uye yakawanda yemimhanzi zvirimo inowanikwa paApple Music uye zviri pachena kuti yatove kukwikwidza musoro-ku-musoro nemamwe masevhisi emimhanzi masevhisi saka kuenda kubva pane chishandiso kuenda kune chimwe hakuzove kwakaomarara kuita nekusimudzira kwerudzi urwu. Enda pano Apple Music yevadzidzi kwemwedzi mitanhatu mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Kana iwe uri mudzidzi iwe unogona kuve nemwedzi mitanhatu yemahara Apple Music
Mubatsiri weNetflix anoti Apple inoda kutarisa paApple TV + kuti ikure
Muongorori anoti kune vanopfuura mamirioni zana vashandisi vane Apple Watch